Masuuliyiinta Nugaal oo ka hadlay howlgalo nabadgalyo oo ka socda magaalada Garoowe - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandMasuuliyiinta Nugaal oo ka hadlay howlgalo nabadgalyo oo ka socda magaalada Garoowe
Masuuliyiinta Nugaal oo ka hadlay howlgalo nabadgalyo oo ka socda magaalada Garoowe
August 18, 2016 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Duqa degmada Garoowe iyo guddoomiyaha gobolka Nugaal oo saxaafada kula hadlay Garoowe. Xuquuqda Sawirka: Puntland Post.
Garoowe-(Puntland Mirror) Howlgalo lagu sugayo amaanka caasimada Puntland, Garoowe, ayaa maalintii labaad ka socda magaalada, sida ay sheegeen saraakiisha.
Duqa degmada Garoowe Xasan Maxamed Ciise (Goodir) ayaa sheegay ujeedada howlgalka loo fulinayo inuu yahay sidii kor loogu qaadi lahaa amaanka caasimada Garoowe, duqa ayaa sheegay in howlgalka ay ka qaybqaadan doonaan ciidamo isku-dhaf ah oo katirsan ciidamada dowlada, Xasan Goodir ayaa sheegay in aysan mar dambe jiri doonin askari aan howlgal ku jirin oo magaalada ku dhex sida qori.
Dhanka kale, Guddoomiyaha gobolka Nugaal, Cumar Cabdulaahi Faroweyne ayaa sheegay in ciidamada ay sugi doonaan amaanka guud ee magaalada Garoowe, isagoo intaas ku daray in magaalada ay u diyaar garoobi doonto martigelinta shirar waaweyn oo uu kamid yahay soo xulista xildhibaanada aqalka sare ee Puntland u matali doona dowlada federaalka Soomaaliya.
Howlgalka oo ay ka qaybqaadanayaan boqolaal ciidamo ah ayaa shalay subax oo Arbaco ahayd ka bilaabmay magaalada Garoowe.
Garoowe ayaa lagu tiriyaa magaalooyinka Puntland iyo guud ahaan Soomaaliya ugu amaanka fiican.
September 25, 2016 Madaxweynaha dowlada Puntland oo dhagax-dhigay xarun cusub oo ay yeelan doonto wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare
September 19, 2016 Masuuliyiinta sare ee DFS oo ka qaybgalay salaada janaasada marxuum Goobaale oo shalay lagu dilay Muqdisho
Madaxweynaha dowlada federaalka Soomaaliya oo kulan sagootin ah u sameeyay safiirkii Burundi u fadhiyay Soomaaliya
Xildhibaanada labada aqal ee Soomaaliya oo la dhaarinayo
Muqdisho-(Puntland Mirror) Xildhibaanada labada aqal ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta oo Talaado ah la filayaa in la dhaariyo. Baarlamaanka cusub ayaa munaasabada dhaarintoodu waxay ka dhacaysaa xarunta ciidanka booliiska ee Janaraal Kaahiye ee Muqdisho, [...]
Raysulwasaaraha Itoobiya oo Muqdisho ku tagay safarkiisii ugu horeeyay
Muqdisho-(Puntland Mirror) Raysulwasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa maanta oo Sabti ah tagay magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya. Abiy ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ku soo dhaweeyay Madaxweynaha Dowladda Federaalka Soomaaliya Maxmed Cabdullaahi Farmaajo. Labada hoggaamiye ayaa [...]